IGXEKE OSOMABHIZINISI I SACP – eHowzit
IGXEKE OSOMABHIZINISI I SACP
Iqembu le SACP kulesi sifundazwe saKwaZulu-Nata selizwakalise okukhulu ukukhathazeka ngesenzo sosomabhizinisi okuthiwa sebebhalele uMnyango wezeMfundo incwadi bekhala ngokungakhishwa ngesikhathi kwezikhangiso zamathenda okuhambisa ukudla ezikoleni.
Ngokusho kwesitatimende esithunyelwe ileliqembu osomabhizinisi abangadalulwanga babhale incwadi bayibhekisa kuNgqongqoshe wezemfundo bekhala ngokungakhishwa kwalezi sikhangiso ngesikhathi.
Ngokusho kukanobhala weSACP kulesisifundazwe uMnu Themba Mthembu uthe kumele engabe abafundi noma uhlaka olumele ukuphathwa kwezikole (School Governing body) abazwakalisa ulaka lwabo ayi nje osomabhizinisi.
“Kuyofanele ukuba uNgqongqoshe wezemfundo uPeggy Neliswa Nkonyeni ake alubhekisise kahle loludaba ngoba kukhona asebefuna ukusheshe bacebe ngaloluhlelo” kusho uMthembu esitatimendeni.
Uqhube wathi kuyophinde kubaluleke ukuthi uma kukhishwa izikhangizo zikhishwe ngezilimi abaziqondayo bonke abantu kuze kuhlomule nalabo abanama Co-operatives abangayanga kahle esikoleni kanjalo nabesifazane.
Uphethe ngelokugxeka kakhulu abama School Governing Bodies ngokungaligqizi qakala loludaba nathe ibona okumele engabe balisukumele ngezinyawo zombili